Izimiso Zamawijethi, Intela Yokusekela Nentengiso | Martech Zone
Izomthetho Zamawijethi, Intela Yokusekela Nentengiso
NgoLwesithathu, Januwari 17, 2007 NgoLwesithathu, Januwari 17, 2007 Douglas Karr
Imibuzo enelukuluku kubo bonke abakhi bewijethi nezinkampani zethu ezikhiphe amawijethi:
Yisiphi isikweletu esikhona, uma sikhona, sokunikeza iwijethi yohlelo lwakho lokusebenza? Ngabe injini yewijethi iyabopheka? Ingabe iwijethi ingabophezeleka? Kokubili?
Ngabe uyawasekela amawijethi sengathi ayingxenye yohlelo lwakho lokusebenza? Noma ingabe zisetshenziswa ngokuzibeka wena engcupheni? '
Uma ungumuntu SaaS inkampani lapho ingekho isoftware elandwayo noma efakiwe, uyiphatha kanjani intela yokuthengisa kumawijethi? Ngabe amawijethi, empeleni, akusiwo ucezu lwesoftware olihambisayo? Yiziphi izinzuzo zentela zalokho?
Ngibuza ngoba selulekwe ukuthi noma imiphi imibhalo, imidiya, noma isoftware esiyisabalalisayo ingaba nomthelela enkampanini yenkampani yethu, ukuxhaswa kanye nentela. Ingabe kukhona ukusebenza noma isigatshana esingafaki izinto ezifana namawijethi?
Lokhu kubaluleke kakhulu njengoba izinhlelo ze-Intanethi ziba namandla ngokwengeziwe. Ukuqonda kwami ​​i-Apollo ukuthi kungahle kusebenze njengohlelo lokusebenza ngaphandle kwesiphequluli, kepha kusetshenziswa ubuchwepheshe besiphequluli. Yini imiphumela yalokho?
Sicela uthumele kunoma yibaphi ochwepheshe bemboni ngangokunokwenzeka. Ngiyabonga!
Jan 18, 2007 ku-5: 52 AM
Zama umbhali wale bhulogi http://www.micropersuasion.com/.
Angahle azi okuthile.
Jan 23, 2007 ku-4: 10 AM
Uphakamisa imibuzo efanelekile.
Iwijethi ukunwetshwa komkhiqizo wenkampani ngaphandle kwenkampani futhi 'iyinxusa' lenkampani emakhasini ewebhu nakuma-desktops.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuqonda okushiwo ukusebenzisa amawijethi njengethuluzi lokubeka uphawu nokumaketha.
Ngikholwa ukuthi iwijethi iphethe isikweletu esifanayo senkampani njengokuphakelayo kwayo kwe-RSS. Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi esisetshenziselwa ukwethula okuqukethwe asibalulekile kangako kunokwangempela. Ngakho-ke qiniseka ukuthi okuqukethwe kwakho kufanelekile.
Amawijethi wedeskithophu ikakhulukazi kufanele aphathwe ngokucophelela njengoba enamandla kakhulu futhi angena ngqo kwikhompyutha yomsebenzisi. Yebo yebo, baphathe njengesoftware oyisabalalisayo.
E-MuseStorm sisebenza kanzima ukwenza i-QA amawijethi ethu futhi siwaphathe njenganoma iyiphi enye isoftware yebhizinisi. Ngithemba ukuthi abanye abathengisi bewijethi bazokwenza okufanayo.
Jan 23, 2007 ngo-6: 46 PM
Siyabonga ngempendulo yakho, Ori!
Impendulo yakho ibonakala isekela ukuthi kokubili okuqukethwe futhi ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuzofanele sikusondele ngale ndlela. Uyazi ukuthi amaklayenti akho akhokha intela yokuthengisa yamawijethi asatshalaliswa - noma ngabe akhululekile ukulanda?